Raysalwasare Cumar Cabdirashiid oo khudbad ka jeediyey shirkii Golaha Amaanka – STAR FM SOMALIA
Raysalwasaraha Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo soo gaaray magaalada New York ee Dalka Maraykanka isagoo ka qeyb galay kulan shalay looga hadlay xaalada Soomaaliya oo ka dhacay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Shirkaan oo uu shir gudoominayey Xoghayaha arimaha dibada ee UK Mr.Philip Hammond ayaa looga hadlayey hormarka Dalka Soomaaliya ee dhinacyada Ammaanka, Dhaqaalaha iyo Siyaasada. Wuxuuna Golaha Amaanka shirkan si gaar ah uga hadlay kaalinta Xafiiska UN-ka ee Soomaaliya iyo taageerida AMISOM oo wakhtiga loo kordhiyey.
Waxaana shirka goob joog ka ahaa dhammaan Xubnaha dawladaha xubnaha ka ah Golaha Ammaanka.
Ergayga UN-ka ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay oo kulankan khudbad kasoo jeediyey ayaa ka waramay wax qabadka Xafiiska UN-ka iyo waliba hawlaha ka socda dalka Soomaaliya oo uu sheegay inay heer wanaagsan marayaan, isla markaana dadaal loogu jiro hiigsiga 2016 iyo sidii loo fulin lahaa hawlaha dhiman.
Xafiiska UNSOA – UNSOS
Fadhigan Golaha Amaanka ayaa looga hadlay Xafiiska UNSOA oo ah xafiiska Qaramada Midoobay ee taageerida ciidamada Midowga Afrika (AMISOM). [United Nations Support Office for the African Union Mission to Somalia] xafiiskan oo la sameeyey sanadkii 2009 ayaa wakhtiga loo kordhiyey iyadoo loo bedalay UNSOS xafiiskan oo taageero u fidin doona UNSOM, AMISOM iyo Ciidamada Soomaaliya
(the UN Support Office in Somalia (UNSOS) and provide support to the African Union Mission (AMISOM), the UN Assistance Mission (UNSOM) and the Somali National Army on joint operations with AMISOM.
Xoghayaha Arrimaha dibada ee Dawlada Ingiriiska oo ah dalka soo diyaariyey shirkan gaarka ah ee looga hadlayo Soomaaliya ayaa shirka furay wuxuuna soo dhaweyn iyo mahadnaq kadib uu sheegay in Dowladiisu diyaar u tahay Tageerida Hormarka Somaliya kasocda.
Wasiirka ayaa sheegay in Madaxda dowlada Soomaaliya looga baahan-yahay inay sii wadaan howlaha hirgelinta Federaalka iyo diyaarinta doorashada 2016.
Sidoo kale Dhammaan Madaxdii ka hadashay goobta ayaa sheegay in ay la dhacsanyihiin iftiinka hormar ee Somaaliya kasoo bidhaamay ayna diyaar u yihiin inay sii wadaan taageeradooda.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Maraykanka Samantha Power oo shirka ka hadashay ayaa sheegtay dhinaceeda in Somaliya Hormar kasoo iftiimayo Caalamkana looga baahan yahay inuu tageero, waxay haweenaydu carabka ku dhufatay Bandhig Bugaageedkii dhawaan ka dhacay Muqdisho oo ay sheegtay in laga fahmi karo Soomaaliya oo dib usoo noqonaysa.
Raysalwasaare Cumar oo khudbad muhiim ah ka jeediyey shirka ayaa sheegay in Soomaaliya cagta saartay jidkii Nabadda iyo hormarka isla markaasna ay Dowladiisu codsanayso in caalamku Dalka Soomaaliya oo dal hodan ah maal gashtaan una Abuuraan Shaqooyin iyo Kobac dhaqaale.
Waxa uu sheegay Raysalwasaaraha in Dawladdiisu dagaal kula jirto Argagixiso Caalami ah Aduunkana looga baahan yahay caawimaad dhinaca dhaqaalaha si buu yiri ay san u waxyeelayn guulihii lagaaray, Raysal wasaaraha oo arimaha Ammaanka ka sii hadlayey ayaa yiri Shaqo la,aan iyo Dhaqaala xumadu waxa ay caawinayaan Argagixisada waxayna ka faa’idaysanayaan dhalinyarada sabool nimada la nool. Wuxuu si gaar ah uga hadlay kooxdii dhawaan sheegtay inay ku biirtay ISIS, arrintaasi oo u sheegay in loo baahan yahay inaysan Beesha Caalamka yareysan.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay dhaawacyo waaweyn u geysteen awooda Al Shabaab isla markaana sii wadaan dagaalka looga saarayo deegaanada ay weli ku sugan yihiin.
Raysalwasaaraha ayaa sheegay in Burcadbadeedu ay hoos udhacday balse ay soo badanayaan kaluumaysiga sharci darada ah oo khatar ku ah Khayraadka Dadka Soomaalida, isla markaasna ay dowladda Soomaaliya caalamka ka codsanayso in laga caawiyo wax ka qabashada kaluumaysiga Sharci darada ah ee khayraad keeda lagu guranayo.
Raysalwasaaraha oo gaba gabada qudbadiisa ku sheegay in Dowladu ka shaqaynayso Dhamaystirka Dastuurka iyo gaarista doorashada 2016 la filayo.
Gabagabadii Shirka oo saacado socday kadib ayuu Raysalwasaruhu sidoo kale waxa uu Shirar kale oo gaar ah la yeeshay Madax dowladaha iyo kuwo Hay’adaha daneeya arrimaha Soomaaliya, iyagoona ka wadahadlay Xaalka dalka iyo sii xoojinta Amniga iyo Hormarka lagaaray, intaas kadib Raysalwasaaraha iyo wafdigiisi ayaa ka ambabaxay Magaalada New York ee Xarunta u ah Qaramada Midoobay.